बुहारी सीतालाई घर बोलाएकै दिन म'र्नु के यो संयोग हो त ? सीता भण्डारीकी सासुले खोलिन मुख (भिडियो सहित) - Microlink Media::News Media Website
सोमवार, भदौ २८, २०७८ | Monday 13th September 2021
बुहारी सीतालाई घर बोलाएकै दिन म’र्नु के यो संयोग हो त ? सीता भण्डारीकी सासुले खोलिन मुख (भिडियो सहित)
रुपन्देहीको तिलोत्तमामा युवतीको ‘सं”कास्प’द ह”त्या’ भएको छ । तिलोत्तमा ८ मणिग्राममा चार नम्बरमा २ बर्षअघि बिबाह भएकी सीता भण्डारी पाैडेलको भदौ १९ गते राती ह”त्या गएको युवतीका माइतीले दा’बि गरेका छन् । उनका ज्वाइ ४३ बर्षका टीका पाैडेलले पाल्पामा दरबार रिसाेर्ट संचालन गरेको बताइएको छ । हरिप्रसादले ज्वाइ टीकाको परिवारले योजनाबद्ध ह”त्या गरेको आ”राेप लगाए । टिकाले आफु अबिबाहित भनि सिता संग बिबाह गरेका थिए।
बिहे पछि सबै कुरा थाहा पाए पनि उनले माइतीमा केहि कुरा भनिनन। जस्तो भए पनि मैले राम्रो गरेर घर गरि खानु पर्छ भनि उनि त्यसै घरमा बासिन। आफ्नो कर्म मा जे लेखेको हुन्छ त्यहि भोग्नु पर्छ भनि उनि जति पि’डा हुदा पनि बासिन। सुरुसुरुमा श्रीमान ले पनि राम्रै गर्ने र पछि कुलतमा लागेको हुनाले बेला बेलामा झ’गडा हुने गर्थ्यो। छोरीको मृत्युपछि माइती पक्ष मिडियामा आएका छन्। हामीले छोरीले मन पराएको केटा संग उ खुशी हुन्छे भनि बिबाह गरिदिएका हौ।
घरमा भएका सबै मान्छे ठिक छन् आमा आमाजू भने अलि ठिक हुनुहुन्न भनि पहिले देखि नै भन्ने गर्थी। जब आमाजू सिता को घर मा आउने गर्थिन जब त्यस घरमा झगडा को सुरुवात हुने गर्थ्यो। आमाजू बिष्णु र सिता बिच धेरै बोलचाल नहुदो रहेछ। सिता माइत आइन भने पनि आमाजुले बचन लागाउने गरेको बताईन। छोरी को निधनबारे माइतीले थाहा पाएपछि उनि जादा सित का श्रीमान्ले मेरी श्रीमतीलाई मा’र्ने दिदि नै हो भनेका रहेछन।
साथमा गएका सालाहरु पदम पोखरेल र लक्ष्मण पोखरेलले घरभित्र गई हेर्दा अट्याच कोठाबाट वाथरुममा पस्ने ढोकामाथि काटिएको चुङ्गी झु’ण्डि’इरहेको, सीतालाई भुँईमा घो’प्टोपा’री सिरानीमा टा’उ’को रा’खिएको, मृ’त’कको दुवै कोखामा निलडाम रहेको, मुखबाट र’गत ब’गी अनुहारमा लत्पत्तिएको र घाँ’टीको दायाँ छेउमा गा’ठो पा’रि’एको चुङ्गीले क’से’को अवस्थाम फे’ला पारेका थिए । त्यति बेलासम्म ज्वाँई घरमा थिएनन् । त्यसको करिव २० मिनेट पछि घरमा ज्वाँई बाहिरबाट घरमा आइ तपाईंहरुको छोरीलाई मार्नमा प्रमुख हात यसैको छ भनी उनको दिदी (जो चितवनबाट माइत आएकी थिईन् विष्णु पौडेल) लाई औँला ठड्याउँदै कराउन थाले । त्यसपछि मृ’त’का बाबु–आमा छोरी जीवित छैनन् भन्ने ठानेर बे’हो’स भई त्यही ढलेछन् ।
उनीहरुले उचित न्यायका लागि पत्रकार सम्मेलन गरेको बताए । ह”त्यालाई ज”बर्ज”स्ती आ”त्मह”त्या बनाउने प्रयास भएको उनले बताए । प्र’हरीले भने आ”त्मह”त्या नै भएको भन्दै दु”रुत्सा”हनको अभियोगमा मु”द्दा लिएर आउन सल्लाह दिएको भण्डारीले बताए ।इलाका प्र”हरी कार्यालय बुटवलका प्र”हरी प्रमुख प्र’हरी नायव उपरिक्षक मदन कुँवरले दुरु”त्साहनको मु’द्दा दर्ता गरेर अ’नुसन्धान शुरु गरिएको जानकारी दिए ।
सीता म’रेपछि श्रीमान घरबाट निस्किएको प्रस्ट भयो, सि.सि.टिभी मा देखियो सबै नालीबेली (भिडियो सहित)
सीता भण्डारीकी आमाजूलाई प्रहरीले लग्यो, आमजुकै मिलेमतोमा यस्तो भएको टिकारामको बयान (भिडियो सहित)
पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस। रुपन्देहीको तिलोत्तमामा युवतीको ‘सं”कास्प’द ह”त्या’...